किन सहजै यौनसम्पर्क गर्न मान्दैनन् केटी साथी ? - Gaule Media ::
Home/रोचक/किन सहजै यौनसम्पर्क गर्न मान्दैनन् केटी साथी ?
ramsharan२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०१:५९
अचेल विवाहको उमेर पछिल्तिर धकेलिएको हुनाले यसरी यौनेच्छा तीव्र हुने उमेरमा पनि हामीले सहज रूपमा यौनसम्पर्क राख्न भने पाउँदैनौं ।
यसकै लागि विवाहभन्दा पहिले विभिन्न तरिकाले यौनसम्पर्क राख्ने ध्येयअनुसार सम्बन्ध बढाइन्छ र आफ्नो साथीलाई त्यसका लागि तयार गर्न विभिन्न क्रियाकलाप पनि गरिन्छ ।
तपाईंले केटी साथी भन्नुभएको छ । तपाई र तपाईंकी केटीसाथीको सम्बन्ध कत्तिको गहिरो छ भन्ने कुरा तपाईंको चुम्बनजस्ता क्रियाकलापले दिए पनि विस्तृत रूपमा त्यसका बारेमा केही उल्लेख छैन । तपाईंको सम्बन्ध कत्तिको प्रणयपूर्ण छ, लेख्नुभएको छैन ।